Qodobbada Xogta ah ee saxda ah oo leh erayo toos ah oo ku jira Microsoft Word - Qoorta
Quotes Custom sax ah by xigashooyin toosan ee Microsoft Word
Disember, 2011 Internet iyo Blogs
Tani inta badan waa dhibaato, marka la soo dhejiyo qoraalka html ee Microsoft Word ama Live Writter.
Dhibaatadu waa code sida
<href ="/ su'aalaha-ku saabsan-teknooloojiyada-cad /"> Su'aalo qariid ah oo ku saabsan teknoolajiyadda CAD </a>
Waxay na siin doontaa dhib, maxaa yeelay calaamadihii oraahda ah ee aan qabsaneyno waa inay noqdaan khadadka toosan ee habka soo socda:
<href =«/ su'aalaha-ku saabsan-teknooloojiyada-cad /«> Su'aalo qariid ah oo ku saabsan teknoolajiyadda CAD </a>
Marka aan rabno inaan bedelno ereyga, ma nagu soo jeedo inooga warran, iyo marka aan haysano nooc ka mid ah xarfaha meesha isbeddelka aan la dareemin dareenka ayaa ka sii daraya. Sidaa daraadeed waa kuwan qaar talooyin ah:
1. Iyadoo Live Writter
Waa inaad haysatid ikhtiyaarada naga saameynaya. Marka lagu daro barta dashka dheer, xasuusnoow nooca nooca ah <! - -> way lumi lahayd, haddii aan sameyno nuqul / dabbaaldegga ereyga LiveWritter ama tifaftiraha WordPress.
Dhibaatadu waxay noqon kartaa mid aan muhiim ahayn illaa aan nuqul ka sameysan html ka soo WordPress ama tifaftiraha kumbuyuutarka oo ku dhufto LiveWritter, ama Word.
2. Iyadoo Microsoft Word
Tani waxaa laga sameeyaa «File> Options», sida LiveWritter. Waa inaad isbedesho, waa inaad sameysaa isbeddelka ku jira tabaha Autoformato iyo Waxqabadka, sida lagu muujiyey sawirka soo socda:
3. Sidee loo badalaa xarafka oo leh habka tooska ah
Haddii ay hore u jirtey, ka dibna raadinta / beddelka ayaa la sameeyaa. Xasuuso in doorashadan, Eraygu u oggolaanayn farqiga, laakiin leh ikhtiyaarka soo-jeedinta aan firfircooneyn, waxay ku badali doontaa dhammaantood qaddar toos ah.
Si aad u joojiso arrintan heerka WordPress, waa inaad isticmaashaa plugin nadaafadda
Xafiiska dilaaga ah WordPress
Post Previous«Previous Geofumadas, 2011 Legacy
Post Next 10 40 + bandhigyo shirka SIG libre 2012Next »